June 20, 2020 - Khitalin Media
ညအိပျယာဝငျလြှငျ ခွထေောကျ ကိုကျခဲနသေူမြား အတှကျ ကိုယျတှဆေ့ေးနညျး
June 20, 2020 Khitalin Media 0
“ညအိပ်ယာဝင်လျှင် ခြေထောက် ကိုက်ခဲနေသူများ အတွက် ကိုယ်တွေ့ဆေးနည်း” ကျွန်တော့်မှာ ညအိပ်ယာဝင်ပြီ ဆိုရင် တော်တော်နဲ့ အိပ်မပျော်ပါဘူး အထူးသဖြင့် ကျွန်တော့်ခြေထောက်က တရုတ်အမွှေးပွစောင်ဆို ခြုံအိပ်လို့ မရဘူး …။ ဆောင်းရာသီဖြစ်နေပါစေ တရုတ်ကလာတဲ့ အမွှေးပွစောင်ခြုံလိုက်တာနဲ့ ခြေဖျားတွေပူ ကိုက်ခဲလာတာ နောက်ဆုံးမနေနိုင်တော့ ခြေထောက်ကိုစောင်အပြင်ဘက်ထုတ်ပြီး အိပ်မှရတယ် …။ […]
ညဘက် အိပ်ယာဝင်ကာနီး ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ အချက် (၅) ချက်
တစ်ခါတစ်လေ ကြိုးစားပန်းစား အလေးချိန်ကျအောင် မျိုးစုံလုပ်နေပေမယ့် မထင်ထားတဲ့ သင့်အကျင့်လေးတွေကြောင့် သင့်အားထုတ်မှုတွေကို အလကားသဲထဲရေသွန်သလို ဖြစ်သွားစေပါတယ်။ သင် ညစာစားတဲ့ပုံစံနဲ့ အိပ်စက်အနားယူတဲ့ပုံစံတွေက သင့်ကိုယ်အလေးချိန်အတက်အကျအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ်။ (၁) အိပ်ရေးမဝရင် (၂) ညစာအများကြီးစားပြီး ချက်ချင်းအိပ်ယာဝင်ရင် အိပ်နေချိန်မှာ ဦးနှောက်ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေ […]
ကမ္ဘာ့ဒုတိယ အခက်အခဲဆုံး အဘိဝံသ စာမေးပွဲကို တနိုင်ငံလုံး ပထမဖြင့် ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဆရာတော်
ကမ္ဘာ့ဒုတိယအခက်အခဲဆုံးပြိုင်ပွဲ(သို့) အဘိဝံသစာမေးပွဲ မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့ တရားတော်အားလုံးဖြစ်တဲ့ တိပိဋကစာမေးပွဲ(ပိဋကတ်သုံးပုံစာမေးပွဲ)သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင် အခက်ခဲဆုံးဖြစ်လေသည်။ (ပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်ထားသည့် ကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကွန်းတိပိဋကဆရာတော်ဘုရားကြီးသည်ကမ္ဘာ့မှတ်ဉာဏ်အကောင်းဆုံး ဂင်းနစ်စံချိန်ဝင်ခဲ့လေသည်) အဘိဝံသစာမေးပွဲဆိုတာကတော့ ကမ္ဘာ့ဒုတိယအခက်ခဲဆုံး စာမေးပွဲဖြစ်လေသည်အစိုးရစာမေးပွဲကဲ့သို့ မအောင်မချင်း ဖြေခွင့်မရှိဘဲ အသက်အားဖြင့် ကန့်သတ်ထားလို့ပါပဲ စာသင်တန်းကို ၂ရနှစ်အတွင်း (တစ်လကျော်နေလျှင်ပင် ဖြေခွင့်မရတော့ပါ)စာချတန်းကို အသက်(၃၀)အတွင်းအမှတ် (၁၀၀) တွင် (၈၅)မှတ်ရမှအောင်မြင်လေသည်။ (၈၅)မှတ်နဲ့အောင်တာပင် […]
အခုတလော လူမှု့ကွန်ယက်မှာ ခေတ်စားနေတဲ့ Face App သုံးရင် ကိုယ့်ဆီက ဘာတွေပါသွားလဲ..?
FaceApp သုံးရင် ကိုယ့်ဆီက ဘာတွေပါသွားလဲ ? ? ပထမဆုံး သူက သင့်ရဲ့ friend list ကိုယူပါတယ်။ ပြီးရင် ဖုန်း နဲ့ ကွန်ပျူတာ အမျိုးအစား model IP address စတာတွေအပြင်၊ ဘယ် website တွေဝင်ကြည့်ထားလဲ အွန်လိုင်းမှာ […]
ဝကျခွံတှေ ပြောကျတဲ့ အပွငျ ဝမျးမှနျတယျ ဆီးမှနျတယျ ခံတှငျးရှငျးပွီး အနံ့ပြောကျတယျ မကျြလုံးကွညျတယျ
မြေအိုး သေးသေးလေးထဲက်ိုရေ မပြည့်တပြည့်ထည့်ပြီးမကျည်းသီး လက်တဆုပ်ခန့်ထန်းလျက် အလုံးသေးသေးလေးတွေ ၁၅လုံးခန့်ဆား ဇွန်းသေးသေး တစ်ဇွန်းခန့် အဲဒီ ၃မျိုးကို ဒီအတိုင်းထည့်ထားလိုက်တယ်မမွှေနဲ့ မွှေစရာမလိုဘူး မွှေရင် အဖတ်မှုန်တွေထလာလိမ့်မယ် တစ်ချက်မှမမွှေဘဲ သူ့ဘာသာကြည်တက်လာတဲ့ အရည်ကြည်ကိုရေမသောက်ဘဲ ရေအစားထိုးပြီးသောက်တယ်သောက်ရင် ဘာအကျိုးဖြစ်မလဲဆိုအရင် စဉ်းစားကြည့်ရအောင် မကျည်းသီးကို ကြေးဘုရားကြေးခွက်တွေ အညှိတွေတက်နေတာတွေကိုပွတ်တိုက်ဆေးကြောပေးရင်ပြောင်လက်သွားတယ် အသားကိုင်ထားတဲ့လက်တွေကိုမကျည်းသီးနဲ့ ဆေးပေးရင် […]
ဘီပိုး၊ စီပိုးစတာတွေကို ကာကွယ်ပေးသည့်အပြင် အသည်းအတွက် ကမ္ဘာမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ အလွယ်ကူဆုံး အသည်းဆေးနည်း
အသည်းအတွက် အကောင်းဆုံး သဘာဝအစားအစာကတော့ မန်ကျည်းသီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မန်းကျည်းသီးရဲ့ ဆေးဖက်ဝင်များကိုလည်း မကြာခဏ တင်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးနည်းကို ဆရာဝန်ကြီးများကိုယ်တိုင် ရေးထားတဲ့ဆေးနည်းဖြစ်ပြီး အခုဆိုရင် ကမ္ဘာမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ အလွယ်ကူဆုံး အသည်းဆေးနည်းတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ (၁) မန်ကျည်းသီးမှည့် လက်တစ်ဆုပ်ခန့်ကို ထန်းလျက်ခဲ ၃လုံး၊ ဆားအနည်းငယ်နဲ့ […]
ညငှက်လေးတွေ (သို့မဟုတ်) အပျော်မယ်လေးများရဲ့ နောက်ကွယ်က ဆင်းရဲဒုက္ခ
တာမွေပလာဇာမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ DJ ကလပ်ရဲ့ အရှေ့ကို ည ၁၂ နာရီ အကျော်မှာ အငှားကား တစီးဆိုက် လာပြီး ကိုကိုအောင် တယောက် ကားပေါ်က ဆင်းလာတယ်။ ကလပ်ရဲ့ အရှေ့မှာရှိနေတဲ့ အငှားကားတွေ ကြားက ကိုအကြီးကောင်ကို ရှာရင်းနဲ့ကောင်မလေးတယောက် ခေါ်ချင် တဲ့အကြောင်း ကိုအကြီးကောင် […]
မိန်းမလိုက်စားခြင်းကြောင့် ရရှိနိုင်သော ဆိုးကျိုးများ
မိန်းမလိုက်စားခြင်းကြောင့် ရရှိနိုင်သော ဆိုးကျိုးများ ဝိဓူရဇာတ်၌ ဝိဓူရပညာရှိအမတ်ကြီးက “မိန်းမလိုက်စားလွန်ကြူးသူ” များကို တေဇသင်္ခတံ=အားအစွမ်း၊ တန်ခိုးအစွမ်း ပညာအစွမ်းတို့၏ ကုန်ခမ်းခြင်းကို၊ သမ္ပသံ(သမ္ပသန္တော)=မြော်မြင်သည်ဖြစ်၍၊ ဣတ္ထိံ= မိန်းမ ကို၊ ဗဠံ=လွန်လွန်ကြူးကြူး၊နဂစ္ဆေယျ=မသွားလာစေရ။(စေ-ဂစ္ဆေယျ=အကယ်၍သွားလာငြားအံ့။)၊ ခီလာ မေဒေါ=အသွေးအဆီ ကြုံလှီ ခြောက်ခန်းသည်ဖြစ်၍၊ ကာသံ=ချောင်းခြောက် ရောဂါစွဲကပ်ခြင်းသို့ လည်းကောင်း၊ ဒရံ=ကိုယ်ပူရောဂါ။ […]
ရှယ်ထားနော် ဆေးနည်းပေါင်းစုံတွေ တစ်သက်လုံးအသုံးဝင်တယ်
ချောင်းဆိုးလျှင်​….ခ​ရေပွင့်​ကိုတညလုံး​ရေစိမ်​၊ နံနက်​တွင်း ထို​ရေကိုစစ်​၍​သောက်​ပါ ၊​ပျောက်​၏ ။ ရင်​ပြည့်​ရင်​ကယ်​ ..ကြက်​ဟင်းခါးသက်​​စောင့်​​ဆေးကို နှမ်းဆီ –ပရုပ်​ဆီဖြူ ဖြင့်​​ဖျော်​၍ ရင်​မှအသာအယာသပ်​ချပါ ။ နှာပိတ်​​သော်​…..ကြိတ်​မှန်​ရွက်​ ​ခွေး​သေးပန်းရွက်​ နှစ်​ပါးကြိတ်​ ၊ ရှိန်းခိုနဲနဲထည့်​ ၊ ငယ်​ထိပ်​မှနှာ​ခေါင်းအထိ​ဆေးအရည်​နှင့်​ဆွဲ​ပေးပါ ။ တက်​လျှင်​….ဆင်​ငိုမြက်​ပြုပ်​ရည်​ကိုတိုက်​ပါ ။ အတက်​ချက်​ချင်းကျသွားမည်​ ။ ရေငတ်​ဝမ်းကျ […]
ဒညင်းသီး အာပေါအာဗန္ဓရ စေးထန်းပျစ်ချွဲသော အစာဖြစ်သဖြင့် အာကာသဓာတ်ကို ပျက်စေသည်။ ကျောက်ကပ်ကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။ ၎င်းအစာကိုစားလျှင် အာကာသဓာတ်ရစေသော ပွင့်စေတတ်သော အစာနှင့် တွဲဖက်စားသင့်သည်။ နာနတ်သီး အမျှင်ဓာတ်နဲ့ သတ္တုဓာတ်များ ပါဝင်သဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကို သန့်စင်ပေးခြင်း၊ ကျောက်ကပ်လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် အစာခြေစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။ ဒညင်းသီးပြုတ် စားလိုလျှင် (၁) […]